U-Yesmail Wengeza Izimbangela Ze-imeyili Zangaphandle Zezemidlalo Nesimo Sezulu | Martech Zone
U-Yesmail Wengeza Izimbangela Ze-imeyili Zangaphandle Zezemidlalo Nesimo Sezulu
NgoLwesibili, Okthoba 14, 2014 NgoLwesibili, Okthoba 14, 2014 Douglas Karr
Njengabakhangisi, sivame ukucabanga ngemininingwane yokuziphatha kwamakhasimende nokuziphatha njengezinkambu ezimile njengobudala, ikhodi yeposi, nomnikazi wekhaya. Kodwa-ke, siphuthelwa ukusakazwa bukhoma kwemicimbi eyenzeka ezimpilweni zamakhasimende. Imicimbi elula njengokushintsha kwesimo sezulu ingashintsha indlela yokuziphatha yomthengi kanye nemikhuba yakhe yokuthenga. Uma iqhwa lisendleleni, isibonelo, kungenzeka ukuthi sithenga amathayi amasha noma i-snowblower yomgwaqo wethu.
Ukuxhumana okubhekiswe, okufika ngesikhathi, nokuhambisana nomongo kuthola ukubandakanyeka okuphezulu kwabathengi. Imikhankaso ebangelwe ilingana nazo zonke lezi zincazelo futhi imvamisa ifinyelela izikhathi eziphindwe kabili nezingu-2.5 isilinganiso esivulekile semikhankaso ejwayelekile yebhizinisi, futhi iphindwe kabili isilinganiso sayo sokuchofoza. Kodwa-ke, abathengisi basalwela ukusetha nokuthumela imilayezo evuselelwe emisha. I-Yesmail Trigger Intelligence ivumela abathengisi ukuthi basebenzise amandla ezimo zezulu zemvelo nemicimbi yezemidlalo ukusetha imikhankaso ye-imeyili ekhuluma ngezintshisekelo zababhalisile, indawo, kanye nemvelo esheshayo, ngesikhathi sangempela.
Imvamisa, abahlinzeki bezinsizakalo ze-imeyili benza iklayenti libhekane nezinhlelo zokuqalisa ama-imeyili zisebenzisa uhlelo lwazo lohlelo lokusebenza. Kuhle ukubona I-Yesmail Trigger Intelligence okunikelwe, okwenza kube lula kakhulu kubhizinisi elijwayelekile ukuhlanganisa imikhankaso yokuqalisa imicimbi kumxube wabo wokumaketha.
Qalisa Ubuhlakani Besimo Sezulu
I-Trigger Intelligence yeSimo Sezulu inika amandla abathengisi ukuhlela imikhankaso ye-imeyili ehambisa okunikezwayo lapho isimo sezulu esivele sisethwe senzeka endaweni ethile. Izihlungi zesimo sezulu zifaka:
Ibanga lesivinini somoya
Izimo zezulu: kunamafu, inkungu, imvula ebandayo, isichotho, imvula, iqhwa, ilanga, ukuduma kwezulu
Qalisa Ubuhlakani Kwezemidlalo
I-Trigger Intelligence yezemidlalo inika abathengisi amandla wokuhlela ukuxhumana nge-imeyili okuthunyelwa lapho kwenzeka umcimbi othile wezemidlalo. Izihlungi zezemidlalo zifaka:
Isikhathi (ukuqedwa komdlalo, ukuqeda isikhathi, ikota / ukuqedwa kwesikhathi)
Umphumela wokugcina (win / loss)
Amaphuzu atholwe (ngemuva kokuthinta ama-5, ngemuva kwegoli lokuqala, ngemuva kwamabhasikidi ayi-1, njll.)
Tags: inhlamvu ye-imeyiliinhlamvu ye-imeyili yezemidlaloi-imeyili yesimo sezuluyeboukuqala kwe-imeyiliyesmail inhlamvui-yesmail icuphe ubuhlakani
Ukuqonda okuthakazelisayo kokuthi ubuhlakani obusekelwe endaweni busiza kanjani ukumaketha kwezimoto